७ वर्षे बालकको कमाई २ अर्ब बढी, यो कसरी सम्भव भयो ?  Clickmandu
७ वर्षे बालकको कमाई २ अर्ब बढी, यो कसरी सम्भव भयो ?
क्लिकमान्डु २०७५ मंसिर १८ गते १०:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । करिब ७ वर्षको बच्चाको कमाई कति हुनसक्छ ? आम मान्छेले हसजै भन्न सक्छन् ओठ निर्चोदा दुध आउने बच्चको कमाई के हुनसक्छ र ? त्यो उमेरको बच्चाले कमाई होइन खर्च चाही बढी गर्छ ।
तर, यूट्यूब च्यानलमा नै एक ७ वर्षको बच्चाले करिब २ अर्ब भारतीय मुद्रा बराबरको कमाई गर्ने गरेको पाइएको छ ।
हरेक साता यूट्यूब च्यानलमा बच्चाको खेलौनाको रिभ्यू गरेर उनले मोटो रकम कमाई गर्ने गरेका छन् । जुन कमाईबाट उनका बाबा आमाले पनि राम्रै पैसा पाइरहेका छन् ।
रेयान नामका ती बच्चाले गत वर्ष ११ मिलियन डलरको कमाई गरेका थिए । यस वर्ष सो बढेर २२ मिलिनय बराबर हुन पुगेको छ । भारतीय मुद्रामा उनको कमाई २ अर्ब बढीको हुन जाने बिबिसी हिन्दी संस्करणले जनाएको छ ।
यूट्यूबमा रेयान के भिडियो करोड बढीले हेरेका छन् । रेयान टोय रिभ्यूस् नाम दिइएको यूट्यूब च्यानल सञ्चालनमा रहेको छ । सो च्यानबाट रेयानले खेलौनाको संसारमा लैजाने र जानकारी दिने गरेको छ ।
फोब्र्स पत्रिकाले समेत सन् २०१७ मा उनलाई संसारकै सबै भन्दा बढी भुक्तान पाउनेहरुको सूचीमा राखेको थियो । सन् २०१५ को मार्चदेखि सुरु भएको रेयान टोय रिभ्यूस को भिडियोमा हालसम्म १६ अर्ब बढीले हेरेका छन् ।
तर, उनको यत्ति धेरै चर्चा हुँदा समेत उनको बारेमा थप जानकारी पाउन सकिएको छैन । मात्रै यत्ति जानकारी छ कि उनी अमेरिकी हुन् ।
गत वर्ष उनका आमाले बासिन्टन पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने कि थिइन्- रेयानलाई जब यूट्यूबको बारेमा थाहा भयो । सानै उमरेदेखि नै उनले खेलौनाको बारेमा देखाउने टिभी च्यानलमा धेरै चासो देखाएर हेर्न थाल्यो ।
रेयानका आमाकाअनुसार आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउने बताएका थिए । अरु बच्चाले जस्तै यूट्यूबमा भएका खेलौना किन नदिने । त्यसपछि हामीले पनि पनि किन यसो नगरिदिने भन्ने लाग्यो । हामी एक खेलौनाको पसलमा गयौ र उसलाई मन पर्ने एक लिग सहितको ट्रेन पनि किनिदियौं ।
रेयानको एक भिडियोलाई ८० करोड बढीले हेरेका छन् । मार्च २०१५ मा सुरु भएको यूट्यूब च्यानल खोले । सन् २०१६ को जनवरीमा नै १० लाख बढी सब्सक्राइबर्स गरे । हाल रेयानको यूट्यूब च्यानमा १ करोड बढी सब्सक्राइबर्स रहेका छन् ।